ရှညောသား: October 2017
ဒီဟင်းကိုလည်း အဆောင်မှာတုန်းက အမေ့ချက်တဲ့ထမင်းဟင်းကို လွမ်းလို့ အိမ်ကိုအလွမ်းပြေချက်စားဖြစ်တဲ့
ဟင်းတခွက်ပါ။ ရွာမှာဆို အသားငါးဟင်းထက် ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းသည်သာ ပင်တိုင်ဟင်းအဖြစ်စားရတော့
ချဉ်ပေါင်ပင်မြင်ရင်ကို ပါးစောင်တွေကျိန်းလာသလိုခံစားရတယ်။အရွက်ချိန်ဆို အရွက် အသီးချိန်ဆို အသီး
ဒါတင်မက အသီးခြောက်ပါ ပါသေးတယ်။ အမေ့အိမ်မှာဒီလိုဟင်းတွေစားပြီးကြီးပြင်းလာရတော့
အဲ့ဒီသုံးမယ်နဲ့ထမင်းဝိုင်းပြီးရတာ။ငါးပိကောင်မီးဖုတ်က ဆယ်ခါတခါ ပါခဲပါတယ်။
ချဉ်ရည်ဟင်းနဲ့ ငရုတ်သီးထောင်းကတော့ အမြဲတမ်းလိုလိုစားရတယ်။
တခါတလေ ထမင်းက ပြောင်းဖူး သို့မဟုတ် ပြောင်းထမင်း ဆိုရင် ချဉ်ပေါင်ဟင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ တွဲစားလို့
မလိုက်ဖက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမေ့အခက်အခဲကို သိနေတော့ ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုတတွေ မညည်းညူရက်ပါဘူး။
အမေချက်ကျွေးသမျှ အားပါးတရ စားကြတာချည်းပါပဲ။ ဆန်ဖြူ ထမင်းချည်းဆို ချောချောမောမောမြိုချလို့ရပေမဲ့
ပြောင်းဖူး ပြောင်းဆန် ထမင်းနဲ့ဆို မြို ချလို့မချောမွေ့တာအမှန်ပါ။
ဒီလိုထမင်းဟင်းကြမ်းကြမ်းနဲ့ လေ့ကျင့်လာရတော့ အခုအရွယ်ရောက်လာချိန် နူးနူးညံ့ညံ့အစားအစာတွေဆို
သိပ်ပြီးခံတွင်းမတွေ့လှပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ဆို အမေ့အိမ်ကပြောင်းဆန်ထမင်းနဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းကိုသာ
မျက်စိထဲ လာလာမြင်ယောင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ ပြန်လုပ်ယူလို့ မရနိုင်တဲ့အခါ
ဒါကြောင့် ပွဲတွေတက်တဲ့အခါ အများအားဖြင့် ထမင်းပါတဲ့ အမယ်ကိုသာ ဦးစားပေးရွေးတယ်။
ကိတ်တို့ ကော်ဖီတို့ ဘာဂါ တို့ ပေါင်မုန့်တို့ဆို ဖြစ်နိုင်ရင် မရွေးဘူး ထမင်းလုံးဝမပါတဲ့အခါမျိုးမှာသာ
တချို့ကတော့ပြောကြတယ် မြို့ရောက်လို့ အစားအသောက်ကောင်းတွေစားနေရတော့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းကို
စားချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ အမြဲတမ်းစားနေရချိန်တုန်းကတော့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းကို မုန်းမိတာမှန်ပေမဲ့
တကယ်တမ်းဝေးကွာရတဲ့အခါ အတမ်းတမိဆုံးက တချိန်ကအမုန်းဆုံးကို ဖြစ်နေတတ်တာလေ။
ဒါကြောင့်လည်း အခွင့်သာလို့ ဈေးထဲရောက်ရင်တောင် ဈေးရောင်းတဲ့သူကို အခြေအနေကြည့်ပြီး
ချဉ်ပေါင်ရွက်သည်ချင်းတူရင် ရွာဘက်ကလာရောင်းဟန်တူတဲ့ အသည်ဆီကပဲရွေးဝယ်တယ်။
အသက်အရွယ်ကွာနေရင် အသက်ကြီးတဲ့သူဆီက ၀ယ်တတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသက်ကြီးတဲ့
ဈေးသည်အမျိုးသမီးတွေမြင်ရင် အမေ့ကိုသတိရလို့ အမေကိုယ်တိုင်လည်းဈေးရောင်းနေတာဆိုတော့
ငါ့အမေလည်း သူတို့လိုပဲ ဈေးရောင်းနေတာပါလားဆိုတဲ့အသိကြောင့် ကိုယ်သုံးလို့ရမည့်ဟာ
မှတ်မိသေးတယ် ထီလာမှာတုန်းက သွားနေကျမဟုတ်တဲ့ ဈေးကို လမ်းကြုံလို့ဝင်လည်တော့
ဈေးရောင်းသူအများစုက အနီးအနားရွာကနေလာရောင်းကြတာဆိုတော့ ကိုယ့်ယာထွက်
ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ ဈေးရောင်းနေတာ သူ့ရှေ့မှာလည်းချဉ်ပေါင်ရွက်ပုံကြီးတမျိုးတည်း
လက်ကလည်း ချဉ်ပေါင်ရွက်တွေကို ကိုင်ကိုင်ပြီး လာပါ ပိုပိုသာသာ ပေးမှာပေါ့လို့ ပြော
ကျနော်လည်းသူ့ရှေ့ရောက်တော့ ၀ယ်မယ်လို့မရည်ရွယ်ထားပါပဲ ချဉ်ပေါင်ရွက် ဘယ်လိုရောင်းလဲ
မေးမိတယ်။ တစ်ရာဖိုး နှစ်ရာဖိုးရတယ်လူလေးတဲ့ ကျနော်ကစားတာတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့
တစ်ရာဖိုးလောက်ပဲထည့်ပေးပါပေါ့။ ပါလာတဲ့လက်ဆွဲခြင်းကိုယူပြီး ချဉ်ပေါင်ရွက်တစ်ရာဖိုးထည့်ပေးတာ
တစ်ရာဖိုး လှည်းကျိုးအောင်ရတယ် ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။
အဆောင်ရောက်တော့ ချဉ်ပေါင်ရွက်တွေဒီလောက်အများကြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့
နောက်ဆုံးမှာ ကြံရာမရ အရွက်တွေရေဆေးပြီး သင် အခန်းထဲမှာပဲ
လေနဲ့နွမ်းအောင်လုပ်ပြီး မျှစ်ဝယ်ထားတာနဲ့ရောကြော် ကိုယ်စားဖို့လည်းချန်
မန္တလေးမစိုးရိမ်မှာစာဝါလိုက်နေတဲ့ ညီ ဦးဇင်းဆီကို ချဉ်ပေါင်ကြော်တဗူး၊ ငါးခြောက်ကြော်တဗူး၊
ကြက်သားမွကြော်တဗူး ကြော်ပြီး လူကြုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ကျန်တာကိုတော့ အခုပုံထဲကိုလို ခရမ်းချဉ်သီးပါလေကာနဲ့ လုံးချက်ငရုတ်သီးစပ်လေးချက်စားလိုက်ပါတယ်။
အမေ့လက်ရာကိုမမီပေမဲ့ အမေ့လက်ရာနီးပါးစားလို့ကောင်းတဲ့ ဟင်းတခွက်ပါ။
အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ။ လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ချဉ်ပေါင်ဟင်းခွက်မြင်ပြီး ဗိုက်တွေဆာလိုက်တာ ထမင်းပူပူလေးနဲ့စားလိုက်ရရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲနော် :)
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, October 15, 20170comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ပထမဆုံးကျိုစားဖြစ်တဲ့ ငါးပိရည်ကျိုပါ။အဝေးရောက်နေချိန်
ငါးပိရည်ကျိုးကို တမ်းတမ်းတတရှိပေမဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ဆိုင်မှာစားဖြစ်တဲ့အခါလောက်ပဲ
နံနက်ပိုင်းဈေးကနေ ပြန်ဝယ်ထားပြီး ညနေခင်းမှာပြန်ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်လေးတွေရှိရာကိုခဏရောက်ခိုက်
ဘာဟင်းချက်ရမှန်းဝေခွဲလို့မရဖြစ်နေချိန် ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့အတွေးကြောင့် ငါးပိရည်ကျို ကျိုဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး
အရင်ဆုံး ငါးပိရည်ကျို တထုပ်ကို နနွင်းမှုန့်နည်းနည်းထည့်ပြီးအရည်ကျို။ မျှစ်ကိုပြန်ပြုတ်ပြီးတော့ရေစစ်
ငါးပိရည်ကျိုထဲ ထည့်ဖို့အတွက် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုဒယ်အိုးနဲ့လှော်ပြီးထောင်းပါတယ်။
ငရုတ်သီးအမှည့်ကိုလည်းလှော်ပြီး သပ်သပ်ထောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ်ခရမ်းချဉ်သီးအနေတော် နှစ်လုံးကိုပြုတ်ပြီး
အရသာမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပြီးအရသာမြည်းပါတယ်။ အရသာအနေတော်ဖြစ်တော့ ငရုတ်သီးမှည့်လှော်ထောင်းထားတာကို အပေါ်ကဖြူးပါတယ်။ငရုတ်သီးစိမ်းကအောက်ထဲမှာနေတော့အပေါ်မှာငရုတ်သီးဖတ်မပေါ်ရင်
ငါးပိရည်ကျိုနဲ့မတူဘူးလို့ ခံစားရလို့ ထပ်ထည့်တာပါ။ အစပ်ကြောက်ရင်တော့ ငရုတ်သီးလျှော့ထည့်ပါ။
ပြီးရင် သံပုရာသီး တခြမ်းလောက် အရည်ညှစ်ထည့်လိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ တို့စရာတွေကို ပန်းကန်ထဲမှာစီထည့်ပြီး ထမင်းနဲ့ ငါးပိရည်ကျိုတွဲဖက်ပြီး
တို့စရာတွေကတော့ - ရုံးပတီသီးပြုတ်၊မျှစ်ပြုတ်၊ခရမ်းကျွတ်သီး၊ သဘောင်္ဂွေးသီး၊ မုံလာဥနီ၊ သခွားသီး၊
သံပုယိုရွက်နု နဲ့ ပင်စိမ်းရွက် ပါ။
ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့အတို့အမြှုပ်စုံစုံလင်လင်မို့ အဲ့ဒီနေ့က ထမင်းတော်တော်ကုန်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေဖေ့စ်ဘွတ်မှာတင်တော့ တော်တော်ပွဲဆူသွားတယ် ငါးပိရည်ကျိုနည်းပြောပါ နောက်တခါကျိုရင်
ပေးစားပါနဲ့ အဲ့ဒီမှာတုန်းကတော့ ကျိုနည်းအသေးစိတ်မတင်ဖြစ်ဘူး။
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, October 10, 20170comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မျှစ်ရေစိမ်ကျခေါ် မျှစ်ဆတ် ပေါ်ချိန် ဖရုံရွက်နဲ့ ဟင်းချိုချက်စားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းချိုတမျိုးပါ
ရွာမှာဆိုရင်တော့ ရုံးပတီသီး၊ခ၀ဲသီးနုမျှစ်ဆတ်နဲ့ တခါတရံ ငှက်ဆွတ်မှိုပါ ထည့်ချက်တယ်။
မိုးရာသီ အသီးအရွက်ပေါချိန် မျှစ်ပေါ်ချိန်မှာ အမြဲတမ်းလိုလိုစားရတဲ့ဟင်းတခွက်ပေါ့။
မြို့ပေါ်ရောက်တော့မျှစ်ဆတ်ရဖို့မလွယ်လို့ ဈေးထဲတွေ့တုန်းမှာ ၀ယ်ပြီးချက်စားဖြစ်တယ်။
ကြောင်လျှာသီးကလည်း ရွာမှာအလကားရနိုင်ပေမဲ့ မြို့မှာတော့ တစ်တောင့်ကို လေးငါးရာ ပေးဝယ်ရတယ်။
အကြိုက်ဆုံးအသီးတွေထဲက တခုဖြစ်တော့ မြင်တာနဲ့ ဈေးမကြည့်ဘဲဝယ်မိပြန်တယ်။
ကြောင်လျှာသီးကိုတော့ ရွာမှာ မီးဖုတ်ပြီးမှချက်တယ်။ အတောင့်လိုက် မီးဖိုပေါ်မှာတင်ပြီးမီးဖုတ်ရင်
အပေါ်ကအခွံတွေပူပေါင်းလိုဖုလာအောင် တတောင့်လုံးကိုမီးဖုတ်ပြီး ရေစိမ်ထားလိုက်ရင် အခွံတွေကွာကုန်တယ်
အဲ့ဒီရေစိမ်ပြီးသားကို လက်သုံးလုံးခန့် အပိုင်းတွေပိုင်းပြီးတော့
အဲ့ဒီလိုချက်တာက သိပ်ပြီးမခါးဘဲ ပိုပြီးစားလို့ကောင်းတယ်။
ကြောင်လျှာသီးကိုမန်ကျည်းသီးနဲ့ချက်ရင်ပိုစားကောင်းသလို ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အချဉ်နဲ့ တွဲစားရင်တော့
ပိုပြီးခါးတာ သတိထားမိတယ်။ ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်နဲ့ အချဉ်ရည်သောက်ဟင်းတွဲစားဖြစ်တဲ့အခါ
သတိထားကြည့်ပါ။ ထူခြားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် :)
ကျနော်ချက်ထားတာကတော့ ကြောင်လျှာသီးကိုမီးဖုတ်ဖို့ မီးဖိုမရှိလို့ အစိမ်းလိုက်ပဲ ပါးပါးလှီးပြီး ဆားနည်းနည်းနဲ့နယ်
ကြက်သွန်ဖြူနီခရမ်းချဉ်သီး ဆီသတ်ပြီးတော့ ပုစွန်ခြောက်အနည်းငယ်နဲ့ လုံးချက်လေးချက်ထားတာပါ။
ပုစွန်ဆိတ်အစိုသေးသေးလေးတွေနဲ့ချက်စားလို့လည်းကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ များများစားရင်တော့
အကျေတော့တက်ပါတယ်။လူကြီးတွေအတွက်ဆို ပုစွန်ဆိတ်အစိုနဲ့ချက်တာ စားဖို့မသင့်ပါဘူး။
မှတ်မှတ်ရရ အခုတခေါက်လာဖို့ ရန်ကုန်ကို မဆင်းခင် တရက်က ဈေးထဲရောက်တော့ ကြောင်လျှာသီးတတောင့်
၀ယ်ပြီး အမေကိုချက်ကျွေးခိုင်းသေးတယ်။အထက်ကပြောသလိုပဲ မီးမဖုတ်ဘဲအစိမ်းလိုက်ပါးပါးလှီးပြီး
ဆားနဲ့နယ် ပုစွန်ခြောက်မရှိလို့ ငါးနီတူခြောက်လေးတွေ ခေါင်းဖြုတ်ပြီး အမေကငရုတ်သီးစပ်လေး
ချက်ကျွေးတာ စားလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာမပြောပါနဲ့။ နိုင်ငံခြားမထွက်ခင်အမေ့လက်ရာလေးစားရတာ
အမှတ်တရပါပဲ။ ကျနော်နဲ့ထမင်းအတူစားတဲ့သူငယ်ချင်းက မင်းနဲ့မင်းအမေချက်တာ လက်ရာချင်းအတူတူပဲတဲ့
ငါကတော့ အမေချက်တာက ပိုစားကောင်းတယ်လို့ သူငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်တယ်။
အခုထိုင်းမှာတော့ကျောင်းတွင်းဆောင်မှာနေရတာမို့ ချက်မစားဖြစ်ဘူး။ ကန်တင်းမှာရောင်းတဲ့ထိုင်းထမင်းဆိုင်တွေမှာပဲ
၀ယ်စားဖြစ်တယ်။ထိုင်းဟင်းတွေနဲ့ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီနေတာရယ် အခန်းဖော်ကိုလည်း အားနာတာရယ်
စာဘက်ကိုပဲအချိန်ပိုပေးချင်တာရယ်ကြောင့် ၀ါသနာအပါဆုံး ချက်ပြုတ်ခြင်းကို
လောလောဆယ် ဥပုသ်စောင့်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကိုရောက်လို့ အသီးအရွက်တွေမြင်ရင်တော့
ပိုးက ထထ လာတာ မနည်းကိုထိန်းရတယ် :)
ဟင်းတွေလည်းကျန်သေးတယ် ဓာတ်ပုံတွေရော ဖြည်းဖြည်းချင်းပို့စ်လေးတွေတင်ပါမယ်။ အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာ
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, October 07, 20170comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီဟင်းကတော့ ဖက်သီးမပေါ်ခင် ဖက်ပွင့်တွေပေါတဲ့အချိန်တုန်းက ဖက်ပွင့်အစိုလည်းဝယ်ချက်
ဈေးပေါလာတော့ များများဝယ်ပြီး အခြောက်လှန်းထားတာကို သူ့ရာသီကုန်သွားခါမှ ပြန်ချက်စားတဲ့ဟင်းတခွက်ပါ။
မချက်ခင်မှာ ဖက်ပွင့်ခြောက်တွေကိုပွလာအောင်ရေစိမ်ထားပြီး ခရမ်းချဉ်သီးတလုံးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီဆီသတ် ငါးပိ သို့မဟုတ် ငံပြာရည်အနည်းငယ်ထည့် ဆီသတ်တာမွှေးလာတော့ ရေစိမ်ထားတဲ့ဖက်ပွင့်ခြောက်ကိုရေတခါလောက်ဆေးပြီးထည့်
ခဏနေတော့ ငရုတ်သီးစိမ်းအလုံးကွဲထောင်းထားတာအုပ် အရသာအပေါ့အငန်မြည်းပြီး ဟင်းအိုးချခါနီးမှာ
ပင်စိမ်းရွက် သို့မဟုတ် နံနံပင် အုပ်ပြီးချ။ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ တွဲဖက်စားလို့ အတော်လိုက်ဖက်ပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဒီလိုမျိုးဟင်းနဲ့ဆို ထမင်းပိုကုန်တယ် :)
အရောင်ကတော့ အမည်းရောင်ဖြစ်နေပေမယ့် စားလို့အရသာရှိတဲ့ အညာသား ကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးသောဟင်းတွေထဲက
အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ ရွှေညာသားက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, October 02, 20170comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook